August 6, 2020 979
बालगृहमा जिम्मा दिए’को बच्चालाई वेवारिसे फेलापारेको भन्दै मिडिया’वाजी गरेपछि विवादमा आएकी पुष्पा अधिकारीको केयर बालगृहमा रहेका अ’न्य बालबालिकाको उद्दार गरिएको छ । त्य’हाँवाट ११ जना बालबालिकालाई उद्दार गरिएको हो ।
तर अहिले सामाजिक सञ्जा’लमा एउटा भिडियो भाइरल भएको छ । जसमा बालगृहका बालबालि’काहरुले आफुह’रुलाई सबैभन्दा बढी माया पुष्पाको लाग्ने बताएका छन् ।
लाइट नेपाल नामको यु’ट्युव च्यानलका युट्यु’वरले गरेको प्रश्नमा उनीहरुले आफुहरुलाई पुष्पा आमाको निकै माया लाग्ने गरेको बताएका छन् ।
सबैभन्दा बढी माया कसको लाग्छ ? भनेर प्रश्न गर्दा उनीहरुले भनेका छन्, पुष्पा आमाको । उनीहरुले बा’लगृहमा आफुह’रुलाई सेवा गर्ने अरु सबैले माया गर्ने पनि बताएका छन् ।
पुष्पा आमाले पनि आफुह’रुलाई निकै माया गर्ने बताए । अर्का युट्युवर भाग्य न्यौपानेले आफु’हरुलाई अरु माया गर्ने आमा’संग लगिदिने भनेको पनि उनीहरुले बताएका छन् ।
भाग्य सरले हामीलाई पुष्पा आमाले माया गर्नुभयो भने बस होइन भने म अरु माया गर्ने आ’माको घरमा लगिदिन्छु । यो संसा’रमा अरु पनि माया गर्ने धेरै आमा छन् भन्नु भयो उनीहरुले एकै श्वरमा भनेको भिडि’योमा सुन्न सकिन्छ ।
काठमाडौं कपनको केयर बालगृहमा रहेका यि ११ जना बालबालिकालाई राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदले उ’द्धार गरेको हो । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदे’शमा रहेकी महिला गर्भाव’स्थामा आएर नेपालमा बच्चालाई जन्म दिएपछि सो बच्चा बालगृहमा जिम्मा दिइ’एको थियो । तर बालगृहकी संचालक पुष्पा अधिकारीले वेवारिसे फेला पारे’को भन्ने देखाउन सडकमा लगेर बच्चालाई राखेकी थिइन् ।
बेवारिसे बच्चा फेला परेको र आफुले संरक्षण गरेको भन्दै मिडियावाजी गरेपछि विवादित भए’को सो बालगृहवाट सबै बालबालि’कालाई उ’द्दार गरिएको हो ।
केयर बाल गृहका बालिका
बुधबार परिषद र केन्द्रीय बालबालिका खोज’तलास समन्वय केन्द्रले बुढानीलकण्ठ नगरपा’लिकाको महिला, बालबालिका एवं ज्येष्ठ नागरिक शाखा र बुढानी’लकण्ठ नगरपालिका– ११ का व’डाध्यक्ष राजु अधिकारीको रोहबरमा ११ जनाको उद्धा’र गरिएको हो ।
उनले चार वर्ष अघि देखि आफ्नै घरमा बालबालि’कालाई संरक्षण दिँदै आएकी थिइन् । एक वर्ष यत यस्तै युट्युवर’हरुको सहयोगवाट रकम पनि संकलन भएको’ थियो । उनलाई बच्चा देखाएर पैसा उठाउने धन्दा गर्न लागेको आरोप लागेको छ ।
तर उनले विदेशमा ब ला त्कृ त भएर गर्भवती अवस्थामा आएकी महिलार्ला सामाजिक लाञ्छना’वाट बचाउन आ’फुले यस्तो गरेको बताएकी छन् । वच्चा बेवारिसे फेला परेको भन्दै भिडियो सार्वजनिक भएपछि बच्चाको आमाले आफ्नो सन्तान पनि फि’र्ता लिएर गएकी छन् ।
Prevमुद्दा हाल्न पुष्पा अदालत जादै ! मेरो बच्चा फिर्ता चाहियो भन्दै रोईन (भिडियोसहित)
Nextविवादपछि पहिलो पटक अर्जुन र उनकी श्रीमतीको भेट, भेटमा पर्यो चर्काचर्की (भिडियो सहित)
प्रेमीका’ले बोलाएर भेट्न गएका युवा’लाई गाउँलेले पिटेरै ह’त्या गरे